၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အာရှတစ်ခွင်ရှိ အကောင်းဆုံး ဘားများစာရင်း
Jasmine 2018-07-11 860 Lifestyleasia
ယနေ့ခေတ်မှာ ဘားယဉ်ကျေးမှုက လူငယ်တွေအကြား ရေပန်းစားလျက်ရှိနေပါတယ်။ လူ့အသိုင်း အဝိုင်းကလည်း လက်ခံလာသလို ရှိတဲ့အတွက် ယောကျာ်းလေး၊ မိန်းကလေးမရွေး ဘားမှာ ထိုင်တာတွေကို တွေ့လာရပါတယ်။ အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ ဘားယဉ်ကျေးမှုက နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာသာ ရှိတာဖြစ်ပြီး ဘားသွားတဲ့ သူတွေက မကောင်းတဲ့ သူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတာ များပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်း ဘားသွား တယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးအဖြစ် ထင်မြင်ကြတဲ့ အတွက် ဘားယဉ်ကျေးမှုက သိပ်ခေတ် မစားခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပွင့်လင်းခေတ်ကို ရောက်လာတော့ လူငယ်တွေ အများစုက ဘားမှာ ထိုင်ရတဲ့ အရသာကို နှစ်သက်လာကြပါတယ်။ ဘားမှာ ထိုင်ရုံနဲ့ ပျက်စီးတဲ့ လူငယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတချို့ကလည်း လက်ခံလာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အခုခါမှာ ဘားယဉ်ကျေးမှုက ခေတ်ထလာခဲ့ပါတယ်။ TGIF ညတွေဆို သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဘားမှာထိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေလာကြပါတယ်။ တစ်နေ့တာပင်ပန်းခဲ့သမျှ စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဖြေလျော့ဖို့အတွက် လူငယ်တစ်ချို့အတွက်တော့ ဘားက နေရာကောင်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက Asian gastronomic world အဖွဲ့ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ အာရှတစ်ဝန်းက အကောင်းဆုံး ဘား (၅၀) စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Asia’s 50 Best Bars စာရင်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နီးနီးနားနား ဘန်ကောက်မြို့က ဘား (၆) ခုကလည်း နေရာယူထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့… ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံး ဘား (၅၀) စာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
3. Speak Low (Shanghai)
7. Tippling Club (Singapore)
8. Native (Singapore)
9. The Bamboo Bar at Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok)
12. 28 Hongkong Street (Singapore)
14. Sober Company (Shanghai)
16. Bar Trench (Tokyo)
17. Le Chamber (Seoul)
19. Operation Dagger (Singapore)
20. Bar BenFiddich (Tokyo)
21. Charles H (Seoul)
22. Gibson (Singapore)
23. Employees Only Singapore (Singapore)
24. 8 1/2 OttoeMezzo Bombana (Hong Kong)
26. Alice Cheongdam (Seoul)
28. The Union Trading Company (Shanghai)
32. D.Bespoke (Singapore)
33. Nutmeg & Clove (Singapore)
34. Gen Yamamoto (Tokyo)
35. TCRC (Tainan, Taiwan)
37. Bar Orchard Ginza (Tokyo)
39. Loewy (Jakarta)
40. Mixology Salon (Tokyo)
41. Union Brasserie Bakery & Bar (Jakarta)
42. Jigger & Pony (Singapore)
43. Star bar (Tokyo)
45. The Lamp Bar (Nara, Japan)
48. The Ritz Carlton Bar & Lounge (Macau)
50. The Other Room (Singapore)